ကလေးတှရေဲ့ဘာသာစကားစှမျးရညျကို တိုးတကျစဖေို့ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကြှနျမကလေးလေး ဘယျတော့မြားမှ စကားစပွောပါ့မလဲ? ဆိုတာမိဘတှဆေီက မကွာမကွာကွားနကြေ စကားတဈခှနျးပါပဲ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကလေးတှရေဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ ပွောဆိုဆကျဆံမှု ဖှံ့ဖွိုးပုံကိုလလေ့ာပွီး ကလေးတှစေကားစပွောဖို့၊ အခငျြးခငျြးဆကျသှယျနိုငျဖို့ ဘယျလိုအားပေးကွမလဲဆိုတာကို ဆှေးနှေးပေးသှားပါမယျနျော။
စကားပွောကြှမျးကငျြဖို့၊ သူတဈဖကျသားပွောတာကို နားလညျနိုငျဖို့နဲ့ ပွနျပေးရမယျ့အဖွကေို သခြောသိရှိနိုငျဖို့ဆိုတာ လူ့ဘဝမှာအရေးကွီးတဲ့ အရညျအသှေးတှပေါ။ ပွောဆိုဆကျသှယျနိုငျမှသာ သူငယျခငျြးအပေါငျးအသငျးတှဖှေဲ့နိုငျပွီး လူ့ဘဝအရသာကို အကောငျးဆုံးတှကွေုံ့ခံစားနိုငျမှာပေါ့။ ဒီလို တတျကြှမျးလိမ်မာနိုငျဖို့အတှကျ မိဘဆိုတာ ပထမဆုံးနဲ့ အရေးအကွီးဆုံး လကျဦးဆရာတှပေါပဲ။
ကလေးတဈယောကျဟာ အသကျ ၁၂ လကနေ ၁၈ လကွားမှာ ပထမဆုံးစကားလုံးကို စပွောလရှေိ့ပါတယျ။ ဒီအဆငျ့ကိုရောကျပွီဆိုရငျ တဖွညျးဖွညျးခငျြး သငျယူလလေ့ာပွီး မွနျမွနျပွောဆိုတတျမွောကျသှားကွတာပါပဲ။ ဒီလို ကလေးတှရေဲ့ဘာသာစကားပွောဆိုကြှမျးကငျြတတျမွောကျမှုကို ဘယျလိုအားပေးပြိုးထောငျကွမလဲ?
1. ကလေးအာရုံစူးစိုကျမှုကို ရယူပါ။
ကလေးကိုမကျြနှာမူပွီးထိုငျလိုကျပါ။ စကားစမပွောခငျ ကလေးနာမညျလေးကို အရငျချေါလိုကျပါ။ နှဈယောကျလုံးရှမှေ့ာရှိတဲ့ပစ်စညျးတဈခုခုကို စပွောကွညျ့ပါ။ ဒီလိုနညျးအားဖွငျ့ စကားလုံးတှရေဲ့အဓိပ်ပါယျကို ကြှမျးကငျြတတျမွောကျလာပါလိမျ့မယျ။
သီခငျြးဆို၊ အသံအမြိုးမြိုးလုပျ၊ မကျြနှာအမူအရာအပွောငျအပကျြတှေ လုပျပွပါ။ ရှကျစရာမလိုပါဘူး။ ဒီလို အပွောငျအပကျြတှေ ပွောဆိုလုပျပွခွငျးဟာ ကလေးရဲ့အာရုံစူးစိုကျမှုကို ရစသေလို ကလေးကိုရယျမောပြျောရှငျစပွေီး ဘာသာစကားတိုးတကျမှုကိုလညျး မွနျဆနျစပေါတယျ။
3. မေးခှနျးမမေးဘဲ စကားတှပွေောပါ။
မေးခှနျးတှအေမြားကွီးမေးတာဟာ ကလေးကိုစာမေးပှဲစဈနသေလိုပါပဲ။ ဒီ့အစား စကားပွောပါ။ ကလေးဘာလုပျနတေယျ၊ ဘာတှဖွေဈနတေယျဆိုတာမြိုးတှေ ပွောပေးပါ။
ကလေးတှဟော လူကွီးတှထေကျစာရငျ ကွားလိုကျတာကို အဓိပ်ပါယျဖျောဖို့နဲ့ ပွနျပွောဖို့စဉျးစားခြိနျ လိုပါတယျ။ ဒီလိုအဖွပွေနျစောငျ့နခြေိနျမှာလညျး သူတို့ကိုသခြောအာရုံစူးစိုကျကွညျ့ထားသငျ့ပါတယျ။
ကလေးနားလညျလှယျမယျ့ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးအသုံးအနှုနျးတှကေိုပဲ သုံးပါ။
6. ကိုယျပွောတဲ့စကားကို ထပျထပျပွောပေးပါ။
တဈခှနျးတညျးကို ထပျခါထပျခါပွောသငျ့ပါတယျ။ ကလေးလေးတှဟော သူတို့ကွားလိုကျတဲ့စကားကို နားလညျသဘောပေါကျဖို့နဲ့ လလေ့ာမှတျသားနိုငျဖို့ အကွိမျကွိမျအထပျထပျ ကွားဖို့လိုပါတယျ။
ပွောတာကို ကလေးသခြောစူးစိုကျနားလညျဖို့ သီခငျြးသံတှေ၊ တီဗီသံတှကေို တိုးပေးဖို့လိုပါတယျ။
ဥပမာ ကလေးက “ကား” လို့ပွောရငျ ဟုတျတာပေါ့။ “ဘတျဈကားအကွီးကွီး”။ လို့ထပျဖွညျ့ပွောပေးခွငျးဖွငျ့ ကလေးကိုဘာသာစကားရဲ့ နောကျအဆငျ့ကို တကျစနေိုငျပါတယျ။
ကလေးတှရေဲ့ ပထမဆုံးစကားဟာ မိခငျဘာသာစကားဖွဈဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ အင်ျဂလိပျစကားကနောကျပိုငျး ကြောငျးမှာစသငျလို့ရပါတယျ။
ကလေးငယျလေးတှဟော အမှားတှပွေောတတျကွပါတယျ။ အရငျဆုံး အမှနျပွနျမပွငျသေးဘဲ နားလညျကွောငျးပွပါ။ ပွီးမှကလေးကို စကားလုံးအမှနျကို ပွနျပွောပွပါ။ တကယျလို့ကလေးက “ခှေး…ခှေး” လို့ပွောလာခဲ့ရငျ “ဟုတျတာပေါ့ ဟိုမှာခှေးတဈကောငျ”လို့ ပွနျပွောတာမြိုးပေါ့။
ကလေးပွောတာကိုပွနျပွောပေးပါ။ ဒါဟာ ကလေးကို သူပွောတာစိတျဝငျစားကွောငျးပွတာဖွဈသလို အသံတှစေကားတှကေ အရေးကွီးကွောငျးပွတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ကလေးရဲ့ဘာသာစကားတိုးတကျမှုအတှကျလညျး အရေးပါပါတယျ။
တခြို့ကလေးတှအေဖို့ စကားပွောတာ၊ နားထောငျတာဟာ သူမြားထကျကိုပိုပွီးတော့ ခဲယဉျးတတျပါတယျ။ စကားလုံးတှေ၊ စာကွောငျးတှကေို နားလညျရခကျခဲတတျပါတယျ။ တဈခြို့ကလေးတှကေတြော့ စကားလုံးအမှနျရှေးခယျြရတာ၊ အသံအမှနျရှေးခယျြရတာ၊ စာလုံးပွနျစီရတာ ခကျခဲနတေတျပွနျရော။ ဒီလိုကလေးတှကေတြော့ အထူးဂရုစိုကျမှုလိုအပျပါတယျ။
ကျွန်မကလေးလေး ဘယ်တော့များမှ စကားစပြောပါ့မလဲ? ဆိုတာမိဘတွေဆီက မကြာမကြာကြားနေကျ စကားတစ်ခွန်းပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးတွေရဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံမှု ဖွံ့ဖြိုးပုံကိုလေ့လာပြီး ကလေးတွေစကားစပြောဖို့၊ အချင်းချင်းဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုအားပေးကြမလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်နော်။
စကားပြောကျွမ်းကျင်ဖို့၊ သူတစ်ဖက်သားပြောတာကို နားလည်နိုင်ဖို့နဲ့ ပြန်ပေးရမယ့်အဖြေကို သေချာသိရှိနိုင်ဖို့ဆိုတာ လူ့ဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့ အရည်အသွေးတွေပါ။ ပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်မှသာ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေဖွဲ့နိုင်ပြီး လူ့ဘဝအရသာကို အကောင်းဆုံးတွေ့ကြုံခံစားနိုင်မှာပေါ့။ ဒီလို တတ်ကျွမ်းလိမ္မာနိုင်ဖို့အတွက် မိဘဆိုတာ ပထမဆုံးနဲ့ အရေးအကြီးဆုံး လက်ဦးဆရာတွေပါပဲ။
ကလေးတစ်ယောက်ဟာ အသက် ၁၂ လကနေ ၁၈ လကြားမှာ ပထမဆုံးစကားလုံးကို စပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီအဆင့်ကိုရောက်ပြီဆိုရင် တဖြည်းဖြည်းချင်း သင်ယူလေ့လာပြီး မြန်မြန်ပြောဆိုတတ်မြောက်သွားကြတာပါပဲ။ ဒီလို ကလေးတွေရဲ့ဘာသာစကားပြောဆိုကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်မှုကို ဘယ်လိုအားပေးပျိုးထောင်ကြမလဲ?
ကလေးကိုမျက်နှာမူပြီးထိုင်လိုက်ပါ။ စကားစမပြောခင် ကလေးနာမည်လေးကို အရင်ခေါ်လိုက်ပါ။ နှစ်ယောက်လုံးရှေ့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို စပြောကြည့်ပါ။ ဒီလိုနည်းအားဖြင့် စကားလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်လာပါလိမ့်မယ်။
သီချင်းဆို၊ အသံအမျိုးမျိုးလုပ်၊ မျက်နှာအမူအရာအပြောင်အပျက်တွေ လုပ်ပြပါ။ ရှက်စရာမလိုပါဘူး။ ဒီလို အပြောင်အပျက်တွေ ပြောဆိုလုပ်ပြခြင်းဟာ ကလေးရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို ရစေသလို ကလေးကိုရယ်မောပျော်ရွှင်စေပြီး ဘာသာစကားတိုးတက်မှုကိုလည်း မြန်ဆန်စေပါတယ်။
မေးခွန်းတွေအများကြီးမေးတာဟာ ကလေးကိုစာမေးပွဲစစ်နေသလိုပါပဲ။ ဒီ့အစား စကားပြောပါ။ ကလေးဘာလုပ်နေတယ်၊ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေ ပြောပေးပါ။
ကလေးတွေဟာ လူကြီးတွေထက်စာရင် ကြားလိုက်တာကို အဓိပ္ပါယ်ဖော်ဖို့နဲ့ ပြန်ပြောဖို့စဉ်းစားချိန် လိုပါတယ်။ ဒီလိုအဖြေပြန်စောင့်နေချိန်မှာလည်း သူတို့ကိုသေချာအာရုံစူးစိုက်ကြည့်ထားသင့်ပါတယ်။
ကလေးနားလည်လွယ်မယ့် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအသုံးအနှုန်းတွေကိုပဲ သုံးပါ။
တစ်ခွန်းတည်းကို ထပ်ခါထပ်ခါပြောသင့်ပါတယ်။ ကလေးလေးတွေဟာ သူတို့ကြားလိုက်တဲ့စကားကို နားလည်သဘောပေါက်ဖို့နဲ့ လေ့လာမှတ်သားနိုင်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ်အထပ်ထပ် ကြားဖို့လိုပါတယ်။
ပြောတာကို ကလေးသေချာစူးစိုက်နားလည်ဖို့ သီချင်းသံတွေ၊ တီဗီသံတွေကို တိုးပေးဖို့လိုပါတယ်။
ဥပမာ ကလေးက “ကား” လို့ပြောရင် ဟုတ်တာပေါ့။ “ဘတ်စ်ကားအကြီးကြီး”။ လို့ထပ်ဖြည့်ပြောပေးခြင်းဖြင့် ကလေးကိုဘာသာစကားရဲ့ နောက်အဆင့်ကို တက်စေနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေရဲ့ ပထမဆုံးစကားဟာ မိခင်ဘာသာစကားဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားကနောက်ပိုင်း ကျောင်းမှာစသင်လို့ရပါတယ်။
ကလေးငယ်လေးတွေဟာ အမှားတွေပြောတတ်ကြပါတယ်။ အရင်ဆုံး အမှန်ပြန်မပြင်သေးဘဲ နားလည်ကြောင်းပြပါ။ ပြီးမှကလေးကို စကားလုံးအမှန်ကို ပြန်ပြောပြပါ။ တကယ်လို့ကလေးက “ခွေး…ခွေး” လို့ပြောလာခဲ့ရင် “ဟုတ်တာပေါ့ ဟိုမှာခွေးတစ်ကောင်”လို့ ပြန်ပြောတာမျိုးပေါ့။
ကလေးပြောတာကိုပြန်ပြောပေးပါ။ ဒါဟာ ကလေးကို သူပြောတာစိတ်ဝင်စားကြောင်းပြတာဖြစ်သလို အသံတွေစကားတွေက အရေးကြီးကြောင်းပြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့ဘာသာစကားတိုးတက်မှုအတွက်လည်း အရေးပါပါတယ်။
တချို့ကလေးတွေအဖို့ စကားပြောတာ၊ နားထောင်တာဟာ သူများထက်ကိုပိုပြီးတော့ ခဲယဉ်းတတ်ပါတယ်။ စကားလုံးတွေ၊ စာကြောင်းတွေကို နားလည်ရခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကလေးတွေကျတော့ စကားလုံးအမှန်ရွေးချယ်ရတာ၊ အသံအမှန်ရွေးချယ်ရတာ၊ စာလုံးပြန်စီရတာ ခက်ခဲနေတတ်ပြန်ရော။ ဒီလိုကလေးတွေကျတော့ အထူးဂရုစိုက်မှုလိုအပ်ပါတယ်။